Bagaya ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း | မြန်မာသွားရောက်ကြည့်ရှု
← Thapyatan ခံတပ်
အဆိုပါ Bagaya ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (Bagaya ကျောင်း – ကျောင်းဘုန်းကြီးကျောင်းများအတွက်မြန်မာဖြစ်ပါသည်) အင်းထဲမှာလူကြိုက်အများဆုံးခရီးသွားဧည့်မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်တယ် (အင်း), မန္တလေး. ပတ်ပတ်လည် built 1835 ဒါကြောင့်ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ပတ်ပတ်လည်ကိုကျော်နေသည် 260 ဧရာကျွန်းသစ်မှတ်တမ်းများ.
သငျသညျပုံမှန်အားဖြင့်ဒေသခံမြင်းလှည်းယာဉ်မောင်းအပြည့်အဝရှိလိမ့်မည်တဲ့ကျဉ်းမြောင်းတဲ့သစ်ပင်စီတန်းဖုန်လမ်း Bagaya ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းချချဉ်းကပ်.
သင်ကအဆောက်အဦး၏နှစ်ဖက်နှင့်နောက်ဘက်မှအဓိကပလက်ဖောင်းပယ်စွန့်ခွာသောကျောက်လှေကားတခြားအစုံမြင်ရပါလိမ့်မည်, အများအားဖြင့် swampy ဒေသများသို့.
အဓိကအဆောက်အဦရဲ့ဘယ်ဘက်အခြမ်းတွင်ကနောက်ကွယ်မှကောင်းတစ်ဦးလှေကားနှင့်အတူအရပ်ရှည်ရှည်စေတီတော်မျှော်စင်အဆောက်အဦဖြစ်ပါတယ်. ဓာတ်ပုံများအဘို့အကောင်းတစ်ဦးပွဲချင်းပြီးများအတွက်ဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့အပြင်ဘက်မှဒီလှေကားဆင်းသွား. သင်ရရှိနိုင်ရန်အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်ပတ်ပတ်လည်ခုန်အချို့ရှဥ့်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းငှါအဖြစ်သင်ဘုန်းကြီးကျောင်းအဆောက်အဦးအပြင်ဘက်တဝိုက်လမ်းလျှောက်အဖြစ်မျက်စိ peeled သငျသညျကိုသိမ်းဆည်းထားပါ. အရမ်းချစ်စရာကောင်းတယ်.
အဓိကကျောင်းတိုက်အဆောက်အဦအတွင်းပိုင်းဖွင့်ပြတင်းပေါက်ကနေ illumination အပေါ်အဓိကမှီခိုနေကြရသည်နည်းနည်းမှောင်မိုက်ဖြစ်လေ့ရှိတယ်. ဒါကစိန်ခေါ်မှုဓာတ်ပုံများအဘို့ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်. တစ်ဘက်ဘက်မှအထောက်အကူများထွင်းထု bannister ကဝိုင်းအတွင်းကြီးပြင်းပလက်ဖောင်းပေါ်သေးငယ်တဲ့ရွှေ Bhudda ရုပ်တုရှိပါသည်. ကြောင်းအနီးရှိသံဃာတော်များစာအုပ်တွေဆံ့သောသူအချို့အလွန်အသက်ကြီးအလွန်အမင်းထုသေတ္တာများဖြစ်ကြသည်.
သငျသညျ Bagaya ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနေရာချထားအထောက်အကူပြုရန် Google Maps ကိုကိုးကား (Bagaya ကျောင်း) အင်းထဲမှာ – Google ကမြေပုံ
သငျသညျအင်းသွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့လျှင် (အင်း) သူတို့ပုံမှန်အားဖြင့်အစဉ်အမြဲသင့်ရဲ့ခရီးစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် Bagaya ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ဦးအလည်အပတ်ပါဝင်သည်မည်အများအပြားသည်ဒေသခံမြင်းလှည်းယာဉ်မောင်းတစ်ဦးကိုသုံးပါ. ခရီးစဉ်ကောင်းပြီတန်ဖိုးရှိ.